Hearthstone 12.2.27059 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.2.27059 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
သငျသညျWarcraft®၏Overwatch®နှင့် World ဆောင်ခဲ့သောစတူဒီယိုထဲကနေ, HEARTHSTONE®, Blizzard Entertainment ရဲ့ဆုရ Collection ကဒ်ဂိမ်းလာ! အစွမ်းထက်ကတ်များစုဆောင်းနှင့်အားကြီးသောကုန်းပတ်ဖန်တီးပါ။ တစ်ခုအမြဲပြောင်းလဲစစ်မြေပြင်ထိန်းချုပ်သိမ်းယူဖို့ minions နှင့်လောက်လွှဲစာလုံးပေါင်းကိုခေါ်သော။ ကြှမျးကမဟာဗျူဟာများကိုင်စွဲနှငျ့သငျစိန်ခေါ်ဝံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်ကစားသမားအနိုင်ယူ။
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမှော်, မကောင်းသောအကြံနှင့် mayhem ခံစားရသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထိပ်တိုက်တွေ့နှင့် Hearthstone ခံစားကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ join နှင့် TODAY DOWNLOAD!
စဉ် Universal တိုးချဲ့ AN ။ အံ့သြဖွယ် minions နှင့်စာလုံးပေါင်း၏တနျခိုးအသုံးချရန်သင့်ကုန်းပတ် Build - အ Witchwood ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်တောများ Brave နှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာအနားတွင်ပုန်းသောဘေးကိုလိုက်ရှာ, ဒါမှမဟုတ်ရေခဲပလ္လင်၏ Knights နေအစွမ်းထက်မရဏ Knight ဟာဖြစ်လာသည်။ ခရီးကနေ Un'Goro မှဒိုင်နိုဆောများနှင့် elementas တွေဟာရှာဖွေပါ။ မှောင်မိုက်တွင်း Explore နှင့် Kobolds နှင့် Catacombs ထံမှဝှက်ထားသောအစွမ်းထက်လက်နက်နှင့်ဘဏ္ဍာကို unearth ။
သင်၏ရန်သူတို့ကိုရှုံးနိမ့်ဘုန်းအသရေဘို့စစ်တိုက်။ သင့်ရဲ့ကုန်းပတ်ကျွမ်းကျင်များနှင့်ကောက်ကျစ်မဟာဗျူဟာ၏ဤအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီကဒ်ဂိမ်းထဲမှာအစွမ်းထက် combo စုဝေး။ Azeroth ဂြိုလ်စစ်မြေပြင်ထိန်းချုပ်အမိအရဆုပ်ကိုင်နှင့်ကစားသမားတိုက်ခိုက်ရေး vs. ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် Real-time, ကစားသမားခံစားရသည်။
Awesome Prize များရရှိရန် Arena AND DUEL ကစားသမားထဲသို့ခြေလှမ်း။
လှည့်စားလွယ်ကူရှင်းလင်း။ ရူးသွပ် FUN ။
အဆိုပါ Warcraft စကွဝဠာထံမှ•တိုက်ပွဲအထင်ကရသူရဲကောင်းများသည် Lich King, Burning Legion ကိုသစ္စာ Thrall ... ထိုသူအပေါင်းတို့ကဒီမှာရောက်နေ!
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို real-time • (ကစားသမား vs. ကစားသမား) တိုက်ခိုက်ရေး
•ဝင်း, ယာဉ်, ဒါမှမဟုတ်အစွမ်းထက်ကတ်များစုဆောင်း
• Rich Single-player ကိုမစ်ရှင်
သင့် GAME သင်နှင့်အတူသွားရောက်ကာ။ Hearthstone သင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်း device ကိုနဲ့ Desktop ကနေကစားရန်ခွင့်ပြု, သင့် Blizzard အကောင့်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌ Hearthstone Play ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကဒ်ဂိမ်းရဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လိုလားသူနေပဲဖြစ်ဖြစ်, Hearthstone ၏နက်ရှိုင်းမှုနှင့်ကျက်သရေ, ဒါ။ ၌သငျဆှဲမညျသင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း Hearthstone မှာ, အစွမ်းထက်မဟာဗျူဟာများကိုဖန်တီးရန်တစ်သိန်းနှင့်အဆောက်အဦးကုန်းပတ်တဲ့စစ်တိုက်ပါတယ်။ Download များနှင့်ယနေ့ကစား။
အတွက်အထောက်အပံ့: သင်ပြဿနာများကြုံနေရပါသလား? သွားရောက်ကြည့်ရှု: http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/13619661/
* 简体中文 (မျက်မှောက်ရေးရာတရုတ်)
© 2018 Blizzard Entertainment က, Inc Hearthstone, Battle.net, Overwatch, Warcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် Blizzard Entertainment ကအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Blizzard Entertainment က, Inc ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်, အမေရိကန်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ကြသည်။
APK ဗားရွင္း 12.2.27059
Release date: 2018-10-10 10:10:58